Ngaphambi kwe-Obamacare, iSicwangciso seNtshumo kaNtshulo kaZwelonke
Ukuqinisekisa iMshuwalense kubo bonke abantu baseMerika
Ngonyaka ka-2009, uMongameli uBharak Obama watyhila isiphakamiso sakhe kwisicwangciso esenzelwe ukunciphisa iindleko ezikhulayo zonyango ngokubonelela bonke abantu baseMelika nge-inshurensi yezempilo. Isicwangciso, esibizwa ngeMpilocare America ngelo xesha, ekugqibeleni sidluliselwe yiNgqungquthela njengesiKhuseli soPhephelo kunye noMthetho ononophelo wokuNakekelwa koNyaka ka-2010. Le nqaku elandelayo, eyapapashwa ngo-2009, ichaza umbono wokuqala kaMongameli Obama malunga nento esazi ngoku njenge "Obamacare."
I-Obamacare njengoko yajongwa ngo-2009
Isicwangciso se-inshurensi yempilo yelizwe, esilawulwa nguRhulumente we-federal njengenye indlela yinshorensi yempilo yabucala, mhlawumbi iya kucetyiswa kulo nyaka nguMongameli Obama. Nangona iindleko ezinkulu ze-inshurensi yempilo yendalo yonke, iqikelelwe ukuya kuma-2 trillion ngaphezu kweminyaka eyi-10, inkxaso yecebo isanda kwiCongress. U-Obama, kunye neenkokheli zeDemocratic Congress zithi ngokunciphisa iindleko zonyango lwempilo, isicwangciso se-inshorensi yempilo yonke siya kunceda ekunciphiseni ukulahleka kwelizwe. Abaphikisanayo bathi ukulondoloza, nangona kunjalo, kuya kuba nefuthe elincinci kwintsilelo.
Nangona iipolitiki kunye nokuxhamla kunye nokuxhamla kweenkonzo zempilo ezizweni lonke ziye zaxutyushwa iminyaka, i-inshurensi yezempilo yelizwe jikelele ye-ajenda ye-agenda yonakekelo yonakekelo lwezempilo ibonakala inethuba elihle lokwenzeka. Kuze kube ngoku, isakhelo sesicwangciso se-inshurensi yezempilo kazwelonke se-Obama sichazwe ngokucacileyo kuJacob Hacker's plan "Health Care for America" ​​icebo.
Injongo: Inshorensi yeMpilo kuwo wonke umntu
Njengoko kuchazwe nguJacob Hacker weNkcazo yezoQoqosho, i-inshurensi yezempilo yonyango - "Ukunakekelwa kweMpilo eMelika" - uzama ukubonelela nge-inshurensi yempilo efikelelekayo kubo bonke abangekho abantu basebekhulile baseMerika ngokusebenzisa inxaxheba kwenkqubo efana ne-Medicare efana noRhulumente. kunye nezicwangciso zempilo ezibonelelwe ngumqeshi.
Ngaphantsi kweMpilo eMelika, bonke abemi bomthetho base-US abangagqitywanga yi-Medicare okanye isicwangciso esinikezelwe ngumqeshi bangazithengela i-Health Care ye-America. Njengoko okwangoku kusebenza kwi-Medicare, urhulumente wesigqeba uza kulungelelanisa amanani aphantsi kunye nokunakekelwa okuphuculweyo kuzo zonke iinkonzo zeMpilo eMelika. Zonke iinkonzo zeMpilo zeMerika ezibhalisayo zinokukhetha ukwenziwa kwengxelo phantsi kwesicwangciso esinjenge-Medicare esifana ne-optional sokunikezela ngokukhululekileyo ngabanikezeli bezonyango okanye ukhetho olubi kakhulu, olubanzi olubanzi lwe-inshorensi yezempilo.
Ukunceda ukuhlawula isicwangciso, bonke abaqeshi base-US baya kulindeleka ukuba banikezele ngeenkonzo zempilo ezilinganayo kumgangatho kwi-Health Care yaseMerika okanye ukuhlawula irhafu ephantsi yokuhlawula i-payroll yokuxhasa i-Health Care eMelika kwaye bancede abasebenzi babo bathenge zabo ukufihla. Inkqubo iya kufana nendlela abaqeshi bahlawula ngayo irhafu yengqesho ukuba bancedise ukuxhasa iingxowa-mali zokungahlawuli msebenzi .
Abantu abaqeshwe ngokuzimeleyo bangazithengela ukuxhaswa phantsi kweMpilo yeMpilo yaseMelika ngokuhlawula irhafu efanayo kunye nabaqeshi. Abantu abangekho kwindawo yokusebenza bangathengisa ukuhlawula ngokuhlawula iipriyamu ezisekelwe kwingeniso yabo yonyaka. Ukongezelela, urhulumente wephondo uza kunika izikhuthazo zokubhalisisa naziphi na abantu abangenasiphelo kwi-Health Care eMelika.
Abaxhamli be-Medicare kunye ne-S-CHIP (iNkqubo ye-Intshuwalense yezeNtlalo yeeNtsapho) baya kubhaliswa ngokuzenzekelayo kwi-Health Care for America Plan, nokuba ngabaqeshi okanye ngabanye.
Isishwankathelo, abaxhasayo beSebe leMpilo kwiMerika bathi bayeza kunika i-US inkxaso yokunakekelwa kwezempilo ngokubanzi:
ukufumaneka kuwo nawuphi na ummiselo waseMelika ohlala ngaphandle kokungena kwendawo yokusebenzela;
efuna ukuba abaqeshi (kunye nabasebenzi abazisebenzisayo) bathengise ukuthengiswa okufana ne-Health Care eMelika kubo bonke abasebenzi babo okanye bahlawule umrhumo wokuhlawula ngokukhawuleza (6% wee-payroll) ukuxhaswa ngeNkxaso yeMpilo eMerika kubo bonke abasebenzi babo; kwaye
efuna ukuba amaMerika ahlale bengena-inshurensi angazithengi i-private coverage okanye bathenge kwi-Health Care ye-America Plan.
Kubantu abasele bafunyenwe ngumshuwalense wezempilo owenzelwe ngumqeshi, iMpilo yeMpilo yaseMelika iya kuphelisa ngokukhawuleza isongelo lokwenene lokulahlekelwa ngumsebenzi ngenxa yokulahlwa.
Yiyiphi iSicwangciso soMboleko?
Ngokubambisana nabancedisi bayo, iMpilo ye-Health Care yaseMelika iya kubonelela ngokubanzi. Ngokumalunga nazo zonke iintlawulo ze-Medicare zangoku, icebo liya kubhala impilo yengqondo kunye nempilo yabantwana kunye nabantwana. Ngokungafani ne-Medicare, iMpilo yeMpilo yaseMelika iya kubeka imingcele kwiindleko zonyaka ezingaphandle kwee-pocket ezihlawulwe ngababhalisi. Ukugqithiswa kweziyobisi kuya kunikwa ngokuthe ngqo kwi-Health Care yaseMelika, kunokuba kwenziwe izicwangciso zempilo yabucala. I-Medicare iya kuguqulwa ukuba ivumeleke ukubonelela abantu abadala kunye nabakhubazekileyo ngokukhawuleza kweziyobisi ezichanekileyo. Ukongezelela, ukuhlolisiswa kwabantwana kunye nabantwana abaza kubonelelwa ngabo bonke abaxhamli ngaphandle kwindleko ephuma ngaphandle.
Ubungakanani Ubungakanani Bemivuzo?
Njengoko kucetywayo, ukunyamekela kweMpilo yoncedo kwiMaliyam yaseMelika kuyakuba ngu-R70 000 umntu, i-$ 140 kwimbini, i-$ 130 yomzali onomzali oyedwa kunye ne-$ 200 kuzo zonke ezinye iintsapho. Kwababhalisile kwisicwangciso kwindawo yabo yomsebenzi, nabani na abafumana imali engaphantsi kwama-200% kwinqanaba lehlwempu (malunga ne-$ 10,000 kwi-$ 10,000 kunye ne-20,000 kwiintsapho ezine) abayi kuhlawula iiprayimari ezongezelelweyo. Esi cwangciso sinokunikela ngokubanzi, kodwa ngoku singachazwanga, uncedo lokubhalisa ukubancedisa ukufumana inkxaso.
Ukunakekelwa kwezeMpilo eMelika kuza kuqhubeka kwaye kuqinisekiswe. Xa babhalisile, abantu okanye iintsapho ziya kuhlala zikhutshwe ngaphandle kokuba zihlanganiswe zicwangciso ze-inshurensi yangasese ezifanelekileyo ngokusebenzisa umqeshi wazo.
Uluphi uRhulumente ongekho phantsi koMgaqo-siseko?
Indlela yokufumana iKhadi leMedare
I-LPGA Tour Records
Iiminyaniso zeBhayibhile zokuKhatywa
Ukuguqulwa kwesiTaliyane: i-Diminutives
IYunivesithi yaseWest Alabama Admissions
Izixhobo zokubhukuda, izixhobo zogqirha, i-Swimmer's Toys, i-Swim Equipment, kunye neGear
Izinto ezi-5 ezibaluleke kakhulu onokuzenza ngendalo
IiNzuzo zoMculo weMculo
IMetes, Bounds & Meanders